Impilo Engcono: Ungayithuthukisa Impilo Yakho
URUSTAM ohlala eRussia, uphila ukuphila okumatasa. Esikhathini esidlule wayenza izinto ezilimaza impilo yakhe kodwa waqaphela ukuthi wayevuna kabuhlungu. Wayeka ukubhema nokucwila otshwaleni. Noma kunjalo, ukuchitha isikhathi esiningi usuku ngalunye ehleli kuyi-computer kwakumshiya etubekile.
Nakuba uRustam ayeqala emsebenzini ngo-8:00 ekuseni, kwakwethukela ezizwa ephapheme ngokuphelele ngaphambi kuka-10:00, futhi wayegula njalo. Ngakho wenza izinguquko endleleni yakhe yokuphila. Waba yini umphumela? Uyabika, “Kule minyaka engu-7 edlule, angikaze ngiphuthe ngisho nezinsuku ezingaphezu kwezimbili ngonyaka ngenxa yokugula. Ngizizwa ngiyingqabavu, ngiphapheme futhi ngiyakujabulela ukuphila!”
URam, umkakhe nezingane zabo ezimbili ezincane bahlala eNepal. Isimiso sokukhucululwa kwendle asisihle neze endaweni yakubo futhi le ndawo igcwele omiyane nezimpukane. Ngaphambili, uRam nomndeni wakhe babevame ukugula babe nenkinga ehlobene nokuphefumula kuhlanganise nenkinga yamehlo. Nabo benza izinguquko ezayithuthukisa kakhulu impilo yabo.
Yilawule Impilo Yakho!
Kungakhathaliseki ukuthi bacebile noma bampofu, abantu abaningi abakuboni ukuhlobana kwemikhuba yabo nempilo yabo. Bangase babheke ukuba nempilo enhle njengenhlanhla noma into abangenakwenza lutho ngayo. Umbono onjalo wokuyekelela uvimba abaningi ekuthuthukiseni impilo yabo nasekuphileni ukuphila okunomvuzo kakhudlwana.
Eqinisweni, kungakhathaliseki izimo zakho ezingokwezimali, kunezinyathelo eziyisisekelo ongazithatha ukuze uvikele impilo yakho neyomkhaya wakho futhi uyithuthukise kakhulu. Ingabe ukwenza kanjalo kuwufanele umzamo? Ngokuqinisekekile! Ungalithuthukisa izinga lempilo yakho futhi ugweme ukuyifushanisa ngokungadingekile.
URam nomkakhe bekha amanzi okuphuza ahlanzekile
Ngezwi nangesibonelo, abazali bangafundisa izingane zabo ukuba zihlakulele imikhuba emihle okuyokwenza zibe nempilo engcono. Ukuchitha kwabo isikhathi esithe xaxa nokungena ezindlekweni kuyovuzwa ngokuncipha kwezinkinga, ukungaguli njalo nokungachithi imali eningi ezindlekweni zokwelashwa. Ngisho nomzamo omncane nje ungenza lukhulu ekunqandeni ukugula.
Ezihlokweni ezilandelayo, sizoxoxa ngezinyathelo ezinhlanu eziyisisekelo eziye zasiza uRustam, uRam nabanye abaningi. Lezi zinyathelo zingakusiza nawe!
Thumelela Thumelela Ungayithuthukisa Impilo Yakho